ထောင်စုနှစ် - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင်၏ဆွစ်ဇာလန်ဘုရားကျောင်း
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ယုံကြည်ခြင်းအရာသည် WCG သတ်မှတ် > ထောင်စုနှစ်
ထောင်စုနှစ်ဆိုသည်မှာ ခရစ်ယာန်အာဇာနည်များသည် ယေရှုခရစ်နှင့်အတူ စိုးစံမည့်အချိန်ကာလကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသော ကာလဖြစ်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင်ပြီးနောက် ခရစ်တော်သည် ရန်သူအားလုံးကို ဖြိုခွင်းပြီး အရာခပ်သိမ်းကို သူ့ကိုယ်သူ လက်အောက်ခံသောအခါ၊ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ထံ နိုင်ငံတော်ကို လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကိုလည်း အသစ်ဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။ အချို့သော ခရစ်ယာန်ဓလေ့ထုံးတမ်းများသည် ခရစ်တော်ကြွလာပြီးနောက် အနှစ်တစ်ထောင်မတိုင်မီ သို့မဟုတ် အနှစ်တစ်ထောင်ကို စာသားအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြသည်။ အခြားသူများက သမ္မာကျမ်းစာ၏ သရုပ်ဖော်ပုံအနက်ကို ပိုမိုမြင်ကြသည်- ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှအစပြုပြီး သူ၏ဒုတိယကြွလာခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်သည့်အချိန်ကာလသည် မရေမတွက်နိုင်သောကာလဖြစ်သည်။ (ဗျာဒိတ် ၂၀:၁-၁၅; ၂ ကော1,1.၅; တမန်တော်များ၏ လုပ်ရပ်များ 3,19စာ-၂၈; epiphany 11,15; 1. ကောရိန္သု ၁5,24-25)
ခရစ်ယာန်များစွာအတွက်ထောင်စုနှစ်သည်အလွန်အရေးကြီးသောctဝါဒ၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ထောင်စုနှစ်အလေးပေးဘူး။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုသမ္မာကျမ်းစာအပေါ်အခြေခံပြီး၊ တချို့ကထင်တဲ့အတိုင်းသမ္မာကျမ်းစာကဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖော်ပြထားဘူး။ ဥပမာ၊ ထောင်စုနှစ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ တချို့ကနှစ် ၁၀၀၀ အတိအကျယူမည်ဟုဆိုကြသည် ဗျာဒိတ် ၂၀ ကအနှစ်တစ်ထောင်ကပြောပါတယ်။ “ ထောင်စုနှစ်” ဟူသောစကားလုံးသည်အနှစ်တစ်ထောင်ကိုဆိုလိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်မည်သူမဆိုဒီသံသယမလဲ
ပထမအချက်မှာဗျာဒိတ်ကျမ်းသည်သင်္ကေတများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်တိရစ္ဆာန်များ၊ ချို၊ အရောင်များ၊ စာသားအတိုင်းမဟုတ်ဘဲပုံဆောင်သဘောအရနားလည်ရမည့်နံပါတ်များဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင်နံပါတ် ၁၀၀၀ ကိုအများအားဖြင့်ဂဏန်းများအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ တောင်ပေါ်ရှိထောင်နှင့်ချီသောတိရိစ္ဆာန်များသည်ဘုရားသခင်နှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းအတိအကျကိုရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲဘုရားသခင်ပိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သူသည်နှစ်ပေါင်း ၄၀,၀၀၀ အတိအကျကိုရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲကျားမတစ်ထောင်အတွက်ပcovenantိညာဉ်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထိုသို့သောကျမ်းချက်များတွင်တစ်ထောင်သည်အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိဆိုလိုသည်။
ထို့ကြောင့်ဗျာဒိတ် ၂၀ တွင်“ အနှစ်တစ်ထောင်” သည်ပကတိဖြစ်သလောသို့မဟုတ်၎င်းကိုပုံဆောင်သဘောအရနားလည်ရန်လော။ မကြာခဏစာသားအရအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းမဟုတ်သောဤသင်္ကေတစာအုပ်တွင်ပါသောနံပါတ်ကိုအတိအကျနားလည်နိုင်ပါသလား။ နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်အတိအကျကိုနားလည်ရန်သမ္မာကျမ်းစာကိုကျွန်ုပ်တို့မသက်သေပြနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ထောင်စုနှစ်သည်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်အတိအကျဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မပြောနိုင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်မှာ "ထောင်စုနှစ်သည်ဗျာဒိတ်ကျမ်း၌ဖော်ပြထားသောကာလ ... "
ထောင်စုနှစ်သည်“ ခရစ်ယာန်အာဇာနည်ယေရှုခရစ်နှင့်အတူစိုးစံသည့်အချိန်ကာလ” ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းကခရစ်တော်အတွက်ခေါင်းဖြတ်ခံရသူများသည်သူနှင့်အတူစိုးစံမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူအနှစ်တစ်ထောင်စိုးစံလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
သို့သော်ဤသူတော်စင်များသည်မည်သည့်အချိန်တွင်စတင်အုပ်ချုပ်မည်နည်း။ ဤမေးခွန်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ထောင်စုနှစ်နှင့်ပတ်သက်။ အလွန်ပူပြင်းစွာငြင်းခုံမေးခွန်းများကိုသို့ရ။ ထောင်စုနှစ်ကိုကြည့်ရှုရန်နည်းလမ်းနှစ်ခု၊ သုံးခုသို့မဟုတ်လေးခုရှိသည်။
အချို့သောအမြင်များသည်သမ္မာကျမ်းစာကိုချဉ်းကပ်ရာတွင်ပိုမိုပကတိဖြစ်သည်။ အချို့မှာပုံဆောင်သဘောအရဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျမ်းစာထဲမှမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှငြင်းပယ်ခြင်းမရှိပါ။ သူတို့အားလုံးသည်သူတို့၏အမြင်များကိုကျမ်းစာအပေါ်အခြေခံသည်ဟုဆိုကြသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤတွင်ထောင်စုနှစ်နှင့်ပတ်သက်သောအသုံးအများဆုံးအမြင်နှစ်ခု၊ သူတို့၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုဖော်ပြပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအရှိဆုံးပြောနိုင်ရာသို့ပြန်သွားပါမည်။
အနှစ်တစ်ထောင်ရှုထောင့်အရခရစ်တော်သည်အနှစ်တစ်ထောင်ပြီးနောက်တွင်ပြန်ကြွလာသည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ မနှစ်တစ်ထောင်ဟုခေါ်သည်။ ဤရှုထောင့်ကကျွန်ုပ်တို့သည်ဗျာဒိတ် ၂၀ တွင်ဖော်ပြထားသောအချိန်ကာလအတွင်းနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။
၎င်းသည်အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်ချုပ်မှုသည်ငြိမ်းချမ်းသောအချိန်ကာလ ဖြစ်၍ ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာမှသာဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရန်မိုက်မဲပုံရသည်။ "ဒီလူတွေကသမ္မာကျမ်းစာကိုမယုံဘူး" ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းတို့သည်သမ္မာကျမ်းစာကိုယုံကြည်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ခရစ်ယာန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်သမ္မာကျမ်းစာကဘာကြောင့်ဤသို့ယုံကြည်ရကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်။
အဆိုပါ premillennial အမြင်
ကျွန်တော်တို့ဟာ Premillennial အနေအထား၏တင်ပြချက်နှင့်အတူစတင်ကြပါစို့။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ပထမ၊ ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်ပြုချက်များစွာကလူတွေဟာဘုရားသခင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိမယ့်ရွှေခေတ်ကိုကြိုပြောခဲ့တယ်။ “ ခြင်္သေ့နှင့်သိုးသငယ်တို့သည်အတူအိပ်ကြလိမ့်မည်။ ငါ၏သန့်ရှင်းသောတောင်တော်၌မည်သည့်အပြစ်မျှမရှိဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။
တခါတရံတွင်၊ အနာဂတ်သည် လက်ရှိကမ္ဘာနှင့် သိသိသာသာ ကွာခြားသွားပုံရသည်။ တခါတရံတွင် သူတို့သည် တူညီပုံရသည်။ တခါတရံမှာ ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ ထင်ရပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာ အပြစ်တွေနဲ့ ရောထွေးနေတတ်ပါတယ်။ ဟေရှာယ ၂ ကဲ့သို့သော ကျမ်းပိုဒ်များတွင် လူများစွာက “လာ၊ လာကြ၊ သခင်ဘုရား၏တောင်တော်၊ ယာကုပ်၏ဘုရားသခင့်အိမ်တော်သို့ သွားကြကုန်အံ့၊ လမ်းခရီးတော်တို့ကို သွန်သင်၍ လမ်းတော်အတိုင်း လျှောက်ကြကုန်အံ့၊ ." အကြောင်းမူကား၊ ပညတ်တရားသည် ဇိအုန်မြို့မှ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ယေရုရှလင်မြို့မှ ထွက်လိမ့်မည်။" (ဟေရှာယ၊ 2,3).
ထိုသို့ပင်လျှင်လူများတို့သည်ဆုံးမခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်။ လူသားတွေဟာထမင်းတွေစားဖို့လိုတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာသေတတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ စံပြဒြပ်စင်တွေရှိပြီးပုံမှန်ဒြပ်စင်တွေရှိတယ်။ ကလေးငယ်တွေရှိမယ်၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမယ်၊ သေတော့မယ်။
မေရှိယသည်ကမ္ဘာမြေတစ်ခုလုံးနှင့်ပြည့်နှက်ပြီးယခင်တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးအစားထိုးမည့်နိုင်ငံတစ်ခုတည်ထောင်လိမ့်မည်ဟုဒံယေလကပြောပြသည်။ ဓမ္မဟောင်း၌ဤပရောဖက်ပြုချက်များစွာရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိကျသောမေးခွန်းအတွက်အရေးမကြီးပါ။
ဂျူးလူမျိုးများသည်ဤပရောဖက်ပြုချက်များကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိအနာဂတ်ကာလကိုညွှန်ပြသည်ဟုနားလည်ခဲ့ကြသည်။ မေရှိယသည်အုပ်ချုပ်။ ထိုကောင်းချီးများကိုဆောင်ကြဉ်းလိမ့်မည်ဟုသူတို့မျှော်လင့်ကြသည်။ ယေရှုမတိုင်မီနှင့်အပြီးဂျူးစာပေများသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုမျှော်လင့်သည်။ ယေရှု၏တပည့်တော်များသည်လည်းအလားတူမျှော်လင့်ခဲ့ပုံရသည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သတင်းကောင်းကိုသခင်ယေရှုတရားဟောသောအခါဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ပရောဖက်ပြုချက်များမရှိပါဟုကျွန်ုပ်တို့ဟန်ဆောင်။ မရပါ။ သူသည်မေရှိယအုပ်ချုပ်သောရွှေခေတ်ကိုစောင့်မျှော်နေသောလူတို့အားဟောပြောခဲ့သည်။ သူက“ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်” အကြောင်းပြောသောအခါသူတို့စိတ်ထဲတွင်ရှိသည်။
တပည့်တော်များ နိုင်​ငံ​တော်​နီး​ပြီ​လို့ ယေရှု​ပြော​တယ်။ ထို့နောက် သူမကို ထားခဲ့ကာ ပြန်လာမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ယေရှုပြန်လာသောအခါ ရွှေခေတ်ကို ယူဆောင်လာမည်ဟု ဤနောက်လိုက်များက ကောက်ချက်ချရန် ခက်ခဲမည်မဟုတ်ပေ။ တပည့်​တော်​များ​က ဘု​ရား​သ​ခင်​အား အစ္စရေး​တို့​အား​နိုင်​ငံ​တော်​ကို ဘယ်​ချိန်​ပြန်​ရ​မည်​နည်း​ဟု မေး​လျှောက်​ကြ​၏။ (တ 1,6) ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာသောအခါ တမန်တော်များထံ၌ အရာခပ်သိမ်း ပြန်လည်ထူထောင်ချိန်အကြောင်း ပြောရန် အလားတူ ဂရိစကားလုံးကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ 3,21: «အစအဦးကတည်းက ဘုရားသခင်သည် သူ၏သန့်ရှင်းသောပရောဖက်များ၏နှုတ်မှ မိန့်တော်မူသည့်အချိန်တိုင်အောင် အရာအားလုံးကို ကောင်းကင်ဘုံက လက်ခံရပေမည်။”
တပည့်တော်များကဓမ္မဟောင်းကျမ်းကြိုဟောချက်များသည်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာသောအခါအနာဂတ်ကာလ၌ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုတပည့်တော်များကမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ ဒီရွှေခေတ်အကြောင်းတပည့်တော်များကမဟောဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့၏ဂျူးနားထောင်သူများသည်ထိုအယူအဆကိုအကျွမ်းတဝင် ရှိ၍ ဖြစ်သည်။ မေရှိယဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာသူတို့သိဖို့လိုတယ်၊ ဒါကြောင့်တမန်တော်ရဲ့တရားဒေသနာမှာအဓိကပဲ။
အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးသူများ၏အဆိုအရတမန်တော်တရားဒေသနာသည်မေရှိယမှတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အသစ်သောအရာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမဟာမေရှိယမှတဆင့်ဘယ်လိုကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတာကိုသူအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူမဟာအနာဂတ်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြောင်းအများကြီးမပြောခဲ့ပါဘူး။ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်သူတို့ဘာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာသူတို့အတိအကျသိဖို့ခက်ခဲတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောရိန္သုမြို့သားများထံပေါလု၏ပထမစာကိုတွေ့ရသည်။
Paul: In 1. 15 ကောရိန္သု ၊ ရှင်ပေါလုသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပေါ် သူ၏ယုံကြည်ချက်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ အချို့က ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာပြီးနောက် အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံကို ညွှန်ပြသော ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်း တစ်စုံတစ်ခုပြောဆိုခဲ့သည်။
“အကြောင်းမူကား၊ လူအပေါင်းတို့သည် အာဒံ၌သေသကဲ့သို့၊ ခရစ်တော်အားဖြင့်၊ လူအပေါင်းတို့သည် အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။ အသီးအသီး အသီးအသီး သီးသော အသီးအသီး အတိုင်း၊ ထိုနောက်မှကြွလာသောအခါ၊ ခရစ်တော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူတို့သည်၊1. ကောရိန္သု ၁5,22စာ-၂၃)။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် အစီအစဥ်အားဖြင့် လာသည်ဟု ပေါလုရှင်းပြသည်- ခရစ်တော်သည် ပထမ၊ ထို့နောက် ယုံကြည်သူများဖြစ်သည်။ ပေါလုသည် အပိုဒ်ငယ် ၂၃ တွင် “ပြီးနောက်” ဟူသော စကားလုံးကို အနှစ် 23 ခန့် နောက်ကျကျန်ခဲ့သောအချိန်ကို ညွှန်ပြရန် အသုံးပြုသည်။ အခန်းငယ် ၂၄ တွင် “ပြီးသည်” ဟူသော စကားလုံးကို အစီအစဥ်တွင် အခြားအဆင့်ကို ညွှန်ပြရန်၊
“ထိုနောက်မှ၊ တန်ခိုးအာဏာရှိသမျှတို့ကို ဖျက်ဆီး၍ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ထံ နိုင်ငံတော်ကို အပ်နှင်းသောအခါ၊ အကြောင်းမူကား၊ ရန်သူအပေါင်းတို့ကို ဘုရားသခင်သည် မိမိခြေအောက်၌ မချမှီတိုင်အောင် အုပ်စိုးရမည်။ ဖျက်ဆီးရမည့် နောက်ဆုံးရန်သူကား သေခြင်းဖြစ်သည်” (း၂၄-၂၆)။
ခရစ်တော်သည်ရန်သူအပေါင်းတို့ကိုခြေဘဝါးတော်အောက်၌ချထားတော်မမူမှီတိုင်အောင်အုပ်စိုးတော်မူရမည်။ ၎င်းသည်တစ်ကြိမ်သာဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည်အချိန်ကာလကိုအုပ်စိုးသည်။ သူသည်ရန်သူအားလုံး၊ သေခြင်းကိုရန်သူကိုပင်ဖျက်ဆီးသည်။ ထိုနောက်မှအဆုံးကြွလာ။
ဤအဆင့်များကိုပေါလုသည်သက်ရှိသက္ကရာဇ်စဉ်များ၌မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမရှိသော်လည်း“ after” ဟူသောစကားလုံးကိုသူအသုံးပြုခြင်းသည်အစီအစဉ်၏အဆင့်များကိုညွှန်ပြသည်။ ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း။ ဒုတိယအဆင့်မှာယုံကြည်သူများရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးခရစ်တော်သည်စိုးစံလိမ့်မည်။ ဤနားလည်သဘောပေါက်မှုဖြင့်တတိယအဆင့်မှာအရာအားလုံးကိုခမည်းတော်အားဘုရားသခင်ပေးအပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဗျာ ၂၀းဓမ္မဟောင်းကျမ်းသည်ဘုရားသခင့်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝမှု၏ရွှေခေတ်ကိုကြိုပြောထားသည်။ ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်သည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်နေသည်ဟုပေါလုကပြောခဲ့သည်။ သို့သော်အနှစ်တစ်ထောင်အမြင်၏အခြေခံအုတ်မြစ်မှာဗျာဒိတ်ကျမ်းဖြစ်သည်။ လူအများယုံကြည်သောစာအုပ်သည်ဤအရာအားလုံးမည်သို့အတူတကွလာသည်ကိုဖော်ပြသည်။ ကျနော်တို့ကဘာပြောထားသည်ကိုကြည့်ဖို့အခန်း ၂၀ မှာအချိန်ဖြုန်းဖို့လိုတယ်။
ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်းကိုဗျာဒိတ် ၁၉ တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်လေ့လာကြသည်။ သိုးသငယ်၏မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ မြင်းဖြူရှိ၏။ မြင်းစီးသောသူသည်ဘုရားသခင့်တရားစကား၊ ရှင်ဘုရင်တို့၏သခင်၊ အရှင်တို့၏သခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ သူကကောင်းကင်ကနေစစ်တပ်တွေကို ဦး ဆောင်လမ်းပြတယ်
လူမျိုးတို့ကိုတရားစီရင်တော်မူ၏။ သူသည်သားရဲ၊ ပရောဖက်အတုအယောင်နှင့်သူ၏ဗိုလ်ခြေများကိုကျော်ဖြတ်သည်။ ဤအခန်း၌ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်းကိုဖော်ပြထားသည်။
ထို့နောက်ဗျာဒိတ် ၂၀း၁ သို့ရောက်သော်“ ကောင်းကင်တမန်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သည်ကိုငါမြင်၏။ ” ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏စာပေစီးဆင်းမှုတွင်၎င်းသည်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်သည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီကောင်းကင်တမန်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ « ... သူ၌အနက်ဆုံးသောတွင်း၏သော့နှင့်ကြီးသောကွင်းဆက်ရှိ၏။ မာရ်နတ်စာတန်တည်းဟူသောနဂါးဟောင်းကိုကိုင်။ အနှစ်တထောင်ဘို့ချည်နှောင်လေ၏။ ကွင်းဆက်သည်ပကတိအရမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် ၀ ိညာဉ်အားထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်မာရ်နတ်သည်ယဉ်ပါးသွားပြီ။
ဂျူးများနှင့်ရောမတို့၏နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကိုခံရသည့်ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏စာဖတ်သူများသည်စာတန်နှင့်ချည်နှောင်ထားသည်ဟုထင်ကြမည်လော။ အခန်း ၁၂ တွင်မာရ်နတ်သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုလှည့် စား၍ ဘုရားကျောင်းကိုတိုက်ခိုက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာရသည်။ ဒါကမာရ်နတ်ကိုနောက်ပြန်ဆွဲထားတာနဲ့မတူဘူး သားရဲနှင့်မိစ္ဆာပရောဖက်သည်ရှုံး။ မနိုင်ရ။ အခန်းငယ် ၃–“ …နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာမကုန်မချင်းလူများကိုလှည့် စား၍ မရစေရန်အနက်ဆုံးသောတွင်းထဲသို့ချပစ်လှောင် ထား၍ တံဆိပ်ခတ်လေ၏။ ဒါဆိုခဏခဏသွားရတော့မယ်။ John သည်နတ်ဆိုးစွဲခြင်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာမြင်တွေ့သည်။ အခန်း ၁၂ တွင်မာရ်နတ်သည်လောကတစ်ခုလုံးကိုလှည့်ဖြားနေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရသည်။ ယခုတွင်သူသည်ကမ္ဘာကြီးကိုအနှစ်တစ်ထောင်လှည့်ဖြားရန်တားဆီးထားသည်။ ၎င်းသည်ချည်ထားရုံသာမကသော့ခတ်။ တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပေးထားသောပုံသည်စုစုပေါင်းအကန့်အသတ်ရှိမှု၊
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်အုပ်ချုပ်မှု ထိုအနှစ်တစ်ထောင်အတွင်းအဘယ်အရာဖြစ်ပျက်သနည်း။ ယောဟန်ကအခန်းငယ် ၄ တွင်ဤသို့ရှင်းပြသည် -“ ထိုအခါငါပလ္လင်များကိုငါမြင်၏။ ပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်သောသူတို့သည်တရားစီရင်ရသောအခွင့်ကိုရကြ၏။ ဤသည်မှာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာပြီးနောက်စီရင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခန်းငယ် ၄ တွင်ဤသို့ဆက်ပြောသည် -
ယေရှု၏သက်သေခံတော်မူချက်နှင့်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်၎င်း၊ သားရဲ၏ရုပ်တုနှင့်၎င်း၊ သူ၏ရုပ်တုကို၎င်း၊ မကိုးကွယ်သောသူတို့၏ဝိညာဉ်ကို၎င်း၊ သူတို့သည်အသက်ရှင်။ အနှစ်တထောင်ပတ်လုံးခရစ်တော်နှင့်အတူစိုးစံရကြ၏။
ဤတွင်ယောဟန်သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူအာဇာနည်အုပ်စိုးခြင်းကိုမြင်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရသူများသာဖြစ်သည်။ သို့သော်ခြင်္သေ့သတ်ခြင်းခံရသည့်ခရစ်ယာန်များသည်အလားတူဆုကိုမရရှိသကဲ့သို့ဤသတ်ဖြတ်ခြင်းကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ “ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရသူ” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်ခရစ်တော်အတွက်သူတို့၏အသက်ကိုစွန့်ခဲ့သူအားလုံးကိုကိုယ်စားပြုသည့်စကားစုတစ်ခုဖြစ်ဟန်တူသည်။ ခရစ်ယာန်အားလုံးဆိုလိုနိုင်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၌ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူများအားလုံးသည်သူနှင့်အတူစိုးစံလိမ့်မည်ဟုဗျာဒိတ်ကျမ်း၌ပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အချို့လူများသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူအနှစ်တစ်ထောင်အုပ်ချုပ်သည်။ စာတန်သည်ချည်နှောင်ခြင်းကိုခံပြီးလူမျိုးများကိုလှည့်ဖြား။ မရ။
ထို့နောက်အခန်းငယ် ၅ က“ (သေလွန်သောသူတို့သည်အနှစ်တထောင်မကုန်မှီအသက်မရှင်ရကြ)” ဟုသာမန်အတွေးတစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့ကြောင့်အနှစ်တစ်ထောင်အကုန်တွင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်။ ခရစ်တော်မတိုင်မီဂျူးများသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတစ်ခုတည်းကိုသာယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည်မေရှိယပေါ်ထွန်းခြင်းကိုသာယုံကြည်ကြသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကအရာများသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ မေရှိယသည်ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အချိန်ကာလအမျိုးမျိုး၌လာသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်နေသည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းအများစုသည်ကမ္ဘာကုန်ဆုံးချိန်တွင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတစ်ခုတည်းကိုသာဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကထိုအရာသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းပြုသည်ကိုလည်းဖော်ပြသည်။ သခင်ယေရှု၏နေ့ရက်တစ်ရက်ထက်မကသောထမြောက်ခြင်းတစ်ခုတည်းလည်းရှိသည်။ ဘုရားသခင့်အစီအစဉ်မည်သို့ပြီးမြောက်မည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်ဤစာလိပ်ကိုဖွင့်ထားသည်။
အခြားသေလွန်သူများနှင့်ပတ်သက်သောဖြည့်စွက်ထားသောမှတ်ချက်အဆုံးမှာအခန်းငယ် ၅-၆ ကထောင်စုနှစ်သို့ဤသို့ပြန်လာသည် -“ ဤသည်မှာပထမဆုံးထမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမထမြောက်ခြင်းကိုဝင်စားသောသူသည်မင်္ဂလာရှိသောသူ၊ သန့်ရှင်းသောသူဖြစ်၏။ ဒုတိယသေခြင်းသည်ဤအရာများကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ပါ၊ သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ ခရစ်တော်၏ယဇ်ပုရောဟိတ် ဖြစ်၍ အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးရကြလိမ့်မည်။
ထိုရူပါရုံကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတစ်ခုထက် ပို၍ ရှိလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြသည် - တစ်ခုမှာအနှစ်တစ်ထောင်အစတွင်တစ် ဦး ရှိပြီးအဆုံး၌နောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူများသည်စာတန်၏လှည့်ဖြားမှုကိုမခံကြရသောအခါခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော်တွင်ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်ဘုရင်များဖြစ်လိမ့်မည်။
အခန်းငယ် ၇-၁၀ သည်အနှစ်တစ်ထောင်အကုန်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ စာတန်ကိုလွတ်မြောက်စေလိမ့်မည်။ သူသည်လူမျိုးများကိုထပ်မံလှည့်ဖြားလိမ့်မည်။ သူတို့သည်ဘုရားသခင့်လူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်လိမ့်မည်။ ရန်သူများလည်းရှုံးနိမ့်ပြီးမီးအိုင်ထဲသို့ပစ်ချခံရလိမ့်မည်။
ဤသည် premillennial အမြင်တစ်ခုအကြမ်းဖျင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုစာတန်သည်လူများကိုလှည့်ဖြား။ ဘုရားကျောင်းကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေသည်။ သို့သော်သတင်းကောင်းမှာချာ့ချ်ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသူများရှုံးနိမ့်သွားမည်၊ စာတန်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုရပ်တန့်သွားမည်၊ သူတော်စင်များရှင်ပြန်ထမြောက်လာပြီးခရစ်တော်နှင့်အတူအနှစ်တစ်ထောင်စိုးစံလိမ့်မည်။ ပြီးနောက်
၎င်းသည်အစောပိုင်းချာ့ချ်အများစုအထူးသဖြင့်အာရှမိုင်းနားတွင်ယုံကြည်သောအမြင်ဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည်အခြားရှုထောင့်များကိုဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်ပါကအစောပိုင်းစာဖတ်သူများအပေါ်များစွာစွဲမှတ်မှုမရှိခဲ့ပါ။ သူတို့ပြန်လာပြီးနောက်ခရစ်တော်၏အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှုရှိလိမ့်မည်ဟုသူတို့ယုံကြည်ကြသည်။
အနှစ်တစ်ထောင်ကြိုတင်ဝါဒသည် အလွန်ထင်ရှားပါက၊ သမ္မာကျမ်းစာကိုယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များစွာသည် အဘယ်ကြောင့်အခြားနည်းဖြင့်ယုံကြည်ကြသနည်း။ သူတို့သည် ဤပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်း သို့မဟုတ် လှောင်ပြောင်ခြင်းမျိုး မကြုံရပါ။ သူတို့မှာ တခြားဘာသာကို ယုံကြည်ဖို့ ပြင်ပဖိအားတွေမရှိပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်တယ်။ သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်သည်ဟု ဆိုကြသော်လည်း၊ သမ္မာကျမ်းစာ၏ ထောင်စုနှစ်သည် အစပြုမည့်အစား ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာချိန်တွင် ကုန်ဆုံးသွားသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ပထမပြောသောသူသည် ဒုတိယစကားမပြောမှီတိုင်အောင် မှန်သည်ဟုထင်သည် (သုတ္တံ ၁ ကော8,17) နှစ်ဖက်ကြားမပြီးမချင်း မေးခွန်းမဖြေနိုင်ဘူး။
ဗျာဒိတ် ၂၀ းအချိန်
အနှစ်တစ်ထောင်ရှုထောင့်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမေးခွန်းနှင့်အစပြုလိုပါသည် - အခန်း ၁၉ ပြီးနောက်ဗျာဒိတ် ၂၀ သည်သက္ကရာဇ်စဉ်အတိုင်းမပြည့်စုံလျှင်ကော။ ဂျွန်သည်အခန်း ၁၉ တွင်တွေ့မြင်ပြီးနောက်အခန်း ၂၀ တွင်ပါသောရူပါရုံကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်ထိုရူပါရုံများသည်သူတို့အမှန်တကယ်ပြည့်စုံခဲ့သည့်အတိုင်းမလာလျှင်ကော။ ဗျာဒိတ် ၂၀ သည်အခန်း ၁၉ အဆုံး မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါကမည်သို့ဆိုမည်နည်း။
ဤတွင်လွတ်လပ်စွာအချိန်ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်မှုဥပမာကိုဥပမာအားဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ အခန်း ၁၁ သည်သတ္တမမြောက်တံပိုးဖြင့်အဆုံးသတ်ထားသည်။ အခန်း ၁၂ ကယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားပြီးထိုအမျိုးသမီးကိုရက်ပေါင်း ၁,၂၆၀ ကျော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ထံခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ၎င်းကိုယေရှုခရစ်၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်ချာ့ချ်၏နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု၏လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ်အများအားဖြင့်နားလည်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကသတ္တမမြောက်တံပိုးပြီးနောက်စာပေစီးဆင်းမှုမှာအောက်ပါအတိုင်း။ ယောဟန်၏ရူပါရုံကသူ့ကိုနောက်တဖန်သမိုင်းကြောင်း၏အခြားရှုထောင့်ဖျောပွဖို့ယူခဲ့ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်မေးခွန်းမှာဤအချက်သည်ဗျာ ၂၀ တွင်ဖြစ်ပျက်ပါသလား။ အဲဒါကိုအချိန်ပြန်ယူသလား။ ပို၍ တိတိကျကျပြောရလျှင်သမ္မာကျမ်းစာတွင်ဤအရာသည်ဘုရားသခင်ဖော်ပြသောအရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအနက်ဖွင့်ဆိုသည့်အထောက်အထားရှိပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့, အနှစ်တစ်ထောင်အမြင်ကပြောပါတယ်။ ခရစ်တော်၌ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းသည်ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်ကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲဆောင်ကြဉ်းပေးလိမ့်မည်ဟုကျမ်းစာတွင်သက်သေပြထားပါသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းပါသင်္ကေတများနှင့်အနက်အခက်အခဲများနှင့်အတူအခြားသောကျမ်းချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်မှားယွင်းသောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျမ်းချက်တွေသုံးပြီးရှင်းလင်းဖို့လိုတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည်မရေမရာနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးအခြားဓမ္မသစ်ကျမ်းအခန်းကဏ္ this များမှာဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်။
လူ 3,3ဥပမာ-၆၊ ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်ပြုချက်များကို မည်သို့နားလည်ရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသည်– “ထိုအခါ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ယော်ဒန်မြစ်တဝိုက်အရပ်ရပ်သို့ လာ၍ အပြစ်များလွတ်ငြိမ်းခြင်းအတွက် နောင်တ၏ဗတ္တိဇံကို ဟောပြောခဲ့သည်၊ ပရောဖက်ဟေရှာယ၊ ဤသည်မှာ တောကန္တာရတွင် တရားဟောသူ၏ အသံဖြစ်သည်၊ ထာဝရဘုရား၏လမ်းတော်တို့ကို ပြင်ဆင်၍ သူ၏လမ်းတို့ကို အဆင့်မြှင့်လော့။ ချိုင့်ရှိသမျှတို့သည် ချီးမြှောက်၍၊ တောင်ကုန်းရှိသမျှတို့ကို ဖြိုဖျက်ကြလိမ့်မည်။ ကောက်သောအရာသည် ဖြောင့်လိမ့်မည်။ ကြမ်းတမ်းသောအရာသည် ဖြောင့်သောလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ လူအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ရှင်ကို မြင်ကြလိမ့်မည်။”
တစ်နည်းပြောရလျှင်ဟေရှာယသည်တောင်များ၊ လမ်းများနှင့်သဲကန္တာရများအကြောင်းပြောနေချိန်တွင်သူသည်အလွန်သရုပ်ဖော်ပုံများဖြင့်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်မှတစ်ဆင့်ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်အပျက်များကိုကိုယ်စားပြုရန်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပရောဖက်ပြုချက်များကိုပုံဆောင်ဘာသာစကားဖြင့်ပေးခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုသည် m မောက်မြို့သို့သွားသောလမ်းတွင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှပရောဖက်များကသူ့ကိုရည်ညွှန်းသည်။ နောင်လာမည့်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းသူတို့၏အဓိကအလေးထားမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရလျှင်ထိုပရောဖက်ပြုချက်များကိုယေရှုခရစ်၏အလင်းတော်၌မတွေ့ရပါ။ သူကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပရောဖက်ပြုချက်ဖတ်သည့်ပုံစံကိုပြောင်းလဲနေသည်။ သူကအာရုံစိုက်တယ် သူသည်တကယ့်ဗိမာန်တော်ဖြစ်၏။ သူသည်ဒါဝိဒ်အစစ်အမှန်၊
ပေတရုနဲ့လည်း အတူတူပဲလို့ မြင်ပါတယ်။ ယောလဟောတဲ့ ပရောဖက်ပြုချက်ဟာ သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာ ပြည့်စုံတယ်လို့ ပေတရုပြောခဲ့တယ်။ တမန်တော်များ၏ လုပ်ရပ်များကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ 2,16-21: «ပရောဖက်ယောလအားဖြင့် မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကား၊ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ငါ့ဝိညာဉ်ကို ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့အပေါ်သို့ ငါသွန်းလောင်းမည်ဟု ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏။ သင်၏သားသမီးတို့သည် ပရောဖက်ပြု၍၊ လူပျိုတို့သည် ရူပါရုံတို့ကို မြင်ကြလိမ့်မည်။ ထိုကာလ၌ ငါ့ကျွန်များနှင့် ငါ့ကျွန်တို့အပေါ်သို့ ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကို ငါသွန်းလောင်း၍၊ သူတို့သည် ပရောဖက်ပြုကြလိမ့်မည်။ အထက်ကောင်းကင်၌ အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကို၎င်း၊ အောက်မြေကြီး၌ နိမိတ်လက္ခဏာ၊ သွေး၊ မီး၊ မီးခိုးတို့ကို၎င်း ငါပြုမည်။ သခင်ဘုရား၏ ဗျာဒိတ်တော်နေ့ကြီး မရောက်မီ နေသည် မှောင်မိုက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ၍ လသည်လည်း အသွေးဖြစ်လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်ကို ပဌနာပြုသောသူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ပရောဖက်ပြုချက်များစွာသည်အမှန်တကယ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏အသက်၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေသည့်အချိန်နှင့်ပတ်သက်သည်။ လာမယ့်အနှစ်တစ်ထောင်သက်တမ်းရှိသေးတယ်ဆိုရင်အခုနောက်ဆုံးကာလမဟုတ်တော့ဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်၏ဝါကျနှစ်ခုမဖွစျနိုငျပါ ပရောဖက်များကကောင်းကင်၌အံ့ဖွယ်အမှုများနှင့်နေနှင့်လတွင်ထူးဆန်းသောနိမိတ်လက္ခဏာများကိုပြောသောအခါထိုပရောဖက်ပြုချက်များသည်ဘုရားသခင့်လူမျိုးအပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောဆိုခြင်းကဲ့သို့မမျှော်လင့်သောပုံဆောင်ချက်များဖြင့်ပြည့်စုံနိုင်သည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ကြိုတင်ဟောကြားချက်များအားပုံဆောင်အနက်ဖွင့်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အလိုအလျှောက်ငြင်းပယ်ခြင်းမပြုသင့်ပါ။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပရောဖက်ပြုချက်များသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းခေတ်တွင်သင်္ကေတပြည့်စုံခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာပြီးနောက်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသစ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေပြည့်စုံနိုင်သည်။ ပရောဖက်များကတိထားခဲ့သမျှသည်ယေရှုခရစ်၌ဖြစ်စေ၊ ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်၌ဖြစ်စေပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာများဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှပရောဖက်များကထာဝရတည်တံ့သောနိုင်ငံ၊ ထာဝရကာလကိုဖော်ပြသည်။ သူတို့သည်ကမ္ဘာမြေကို ဖျက်ဆီး၍ ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြမည်ဖြစ်သောနောက်ဆုံးသောရွှေခေတ်အကြောင်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ပရောဖက်ပြုချက်တိုင်းကိုမရှင်းပြပါ။ ပြည့်စုံခြင်း၏ဥပမာတစ်ခုသည်မူလကျမ်းချက်များကိုပုံဆောင်ဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားထားသည်ကိုပြသသည်။ ၎င်းသည်နှစ်တစ်ထောင်မြင်ကွင်းကိုသက်သေမပြသော်လည်းအတားအဆီးတစ်ခုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ခရစ်ယာန်များစွာအားနှစ်တစ်ထောင်ဆိုင်ရာအယူအဆကိုယုံကြည်စေသည့်အထောက်အထားများကိုပိုမိုတွေ့ရှိရသည်။
ဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Daniel2ကို အမြန်ကြည့်နိုင်သည်။ အချို့သော ယူဆချက်များသည် ၎င်းကိုဖတ်ဖူးသော်လည်း နှစ်တစ်ထောင်ကြိုတင်ဝါဒကို မထောက်ခံပါ။ “ဤဘုရင်များလက်ထက်၌မူကား၊ ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်သည် မပျက်စီးနိုင်သောနိုင်ငံကို တည်ထောင်တော်မူမည်။ သူ၏နိုင်ငံသည် အခြားသောလူတို့ထံသို့ မရောက်ရ။ ဤနိုင်ငံရှိသမျှတို့ကို ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် သူ့ဟာသူ ထာဝရတည်နေလိမ့်မယ်။” (ဒံယေလ၊ 2,44).
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်လူ့နိုင်ငံအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးထာဝရတည်ရှိလိမ့်မည်ဟုဒံယေလကပြောကြားခဲ့သည်။ ဤအခန်းငယ်တွင်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းဖြင့်ဖျက်ဆီးခံရပြီးဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သို့ရောက်ရှိလာပြီးစာတန့်လွတ်မြောက်မှုကြောင့်အနှစ်တစ်ထောင်အသက်အရွယ်နီးပါးပျက်စီးသွားပြီးနောက်ဆုံးတွင်ဂျေရုဆလင်အသစ်ဖြစ်လာသည်။ မဟုတ်ပါ၊ ဤအခန်းငယ်ကဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်ရန်သူအားလုံးကိုအနိုင်ယူပြီးထာဝရတည်ရှိလိမ့်မည်ဟုသာပြောထားသည်။ ရန်သူအားလုံးကိုနှစ်ကြိမ်အနိုင်ယူဖို့ဒါမှမဟုတ်အင်ပါယာကိုသုံးကြိမ်တည်ဆောက်ဖို့မလိုပါဘူး။
သံလွင်တောင်ကပရောဖက်ပြုချက်သည်သခင်ယေရှုပေးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ထောင်စုနှစ်သည်သူ့အတွက်အရေးကြီးပါကထိုနေရာတွင်သဲလွန်စရှာတွေ့သင့်သည်။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းအစားသခင်ယေရှုသည်သူပြန်ကြွလာခြင်းကိုဖော်ပြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်ဆုနှင့်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုချက်ချင်းခံရသည်။ မ25ဲ ၂၅ သည်တရားစီရင်ခြင်းသို့ရောက်သောဖြောင့်မတ်သူများကိုဖော်ပြရုံသာမကဆိုးသွမ်းသူများသည်သူတို့၏တရားသူကြီးကိုမည်သို့ရင်ဆိုင်ကြရသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့်အမှောင်ထုကြီးများသို့လက်နက်ချခြင်းများကိုလည်းကောင်းဖော်ပြသည်။ ဤနေရာတွင်သိုးနှင့်ဆိတ်များကြားနှစ်တစ်ထောင်ကြားကာလမရှိကြောင်းသက်သေသာဓကမရှိပါ။
ယေရှုသည် မဿဲ ၁ ပါပရောဖက်ပြုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ သူ၏နားလည်မှုကို နောက်ထပ်သဲလွန်စပေးခဲ့သည်။9,28: « ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ငါ့နောက်သို့လိုက်သောသူတို့၊ လူသားသည် ဘုန်းကြီးသောပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်တော်မူသောအခါ၊ အသစ်သောကာလ၌၊ သင်တို့သည် ရာဇပလ္လင်တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးပေါ်တွင် ထိုင်၍ ဣသရေလအမျိုးတဆယ်နှစ်မျိုးတို့ကို စစ်ကြောစီရင်ကြလိမ့်မည်။ »
စာတန်သည်ခေတ္တခဏသာချုပ်နှောင်ထားသည့်အပြစ်ရှိဆဲနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာအကြောင်းယေရှုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူကအရာအားလုံးကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအကြောင်းပြောသောအခါ၊ သူသည်ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်ကိုအရာခပ်သိမ်း၏အသစ်ပြုပြင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သူကဘာမျှမပြောတတ်
အစောပိုင်းအသင်းတော်တွင် အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုး ကြုံခဲ့ရသည်။ တမန် 3,21 ပေတရုက “အစအဦးကတည်းက ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏သန့်ရှင်းသောပရောဖက်များ၏နှုတ်ကပါဌ်တော်မှ မိန့်တော်မူသည့်အရာအားလုံးကို ပြန်လည်ရရှိစေမည့်အချိန်တိုင်အောင် ခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်၌တည်နေရမည်” ဟုဆိုခဲ့သည်။ ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာသောအခါ အရာအားလုံးကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ပေတရုက ဤသည်မှာ ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်ပြုချက်၏ မှန်ကန်သောအနက်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်ဟု ပြောပါသည်။ ခရစ်တော်သည် နောင်အနှစ်တစ်ထောင်အကြာတွင် ကြီးမားသောအကျပ်အတည်းဖြစ်စေရန် အပြစ်ကို ချန်မထားပေ။ ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာသောအခါတွင်၊ အသစ်သောကောင်းကင်နှင့် အသစ်သောမြေကြီးကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အရာအားလုံးကို စီစဥ်ချထားပါသည်။
ပေတရုပြောတာကို သတိပြုပါ။ 2. ဓာတ်ဆီ 3,10 “ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်သည် သူခိုးကဲ့သို့လာလိမ့်မည်။ မိုဃ်းကောင်းကင်သည် ကြီးစွာသော ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ ဒြပ်စင်များမူကား အပူမှ အရည်ပျော်၍ မြေကြီးနှင့်၎င်း နှင့်ဆိုင်သော အမှုတို့ကို စစ်ကြောစီရင်ရလိမ့်မည်။" ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာသောအခါ မီးအိုင်သည် မြေတပြင်လုံးကို သန့်စင်စေသည်။ အနှစ်တစ်ထောင်ကို ဘာမှ မပြောဘူး။ အခန်းငယ် 12-14 တွင် ဤသို့ဆိုသည်– “ကောင်းကင်သည် မီးဖြင့်ကွဲ၍ ဒြပ်စင်များ အရည်ပျော်သောအခါ၊ ငါတို့မူကား၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၌တည်သော ကတိတော်နှင့်အညီ ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်ကို စောင့်မျှော်လျက်နေကြ၏။ ထို့ကြောင့် ချစ်တို့၊ သင်တို့သည် စောင့်မျှော်စဉ်အခါ၊ အညစ်အကြေး ကင်းစင်၍ အပြစ်ကင်းစင်သော သူ၏ရှေ့တော်၌ သင်တို့ကို တွေ့နိုင်စေခြင်းငှာ ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့။"
ကျွန်ုပ်တို့သည်အနှစ်တစ်ထောင်ကိုမျှော်လင့်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်ကိုမျှော်လင့်နေကြသည်။ မနက်ဖြန်၏အံ့ဖွယ်ကမ္ဘာ၏သတင်းကောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်နှင့်သေခြင်းတည်ရှိနေသောလွန်ခဲ့သောအချိန်ကာလမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ရန်ပိုမိုကောင်းသောသတင်းရှိသည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်ရှိအရာအားလုံးပြန်လည်ထူထောင်ရန်မျှော်လင့်သင့်သည်။ ထိုအရာအားလုံးသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာချိန်၌ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။
ပေါလုသည် အလားတူရှုမြင်ချက်ကို တင်ပြသည်။ 2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 1,67 အကြောင်းမူကား၊ သခင်ယေရှုသည် တန်ခိုးကြီးသော ကောင်းကင်တမန်များနှင့်အတူ ကောင်းကင်ဘုံမှ ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါ၊ သခင်ယေရှုသည် သင်တို့ကို ညှဉ်းဆဲသောသူတို့အား ဆင်းရဲဒုက္ခကို ဆပ်ပေးသောအားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်သည် တရားသဖြင့် စီရင်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်ပြန်လာသောအခါ ပထမရာစုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူများကို အပြစ်ပေးတော်မူမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယုံကြည်သူများသာမက ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာချိန်တွင် မယုံကြည်သူများ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟု ဆိုလိုသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ ကြားကာလတစ်ခုမှ မရှိဘဲ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အခန်းငယ် ၈-၁၀ တွင် ထပ်၍ဆိုသည်– “ဘုရားသခင်ကို မသိသောသူနှင့် ငါတို့သခင်ယေရှု၏ ဧဝံဂေလိတရားကို မနာခံသောသူတို့အား ဒဏ်ပေး၍ မီးလျှံ၌ ဒဏ်ပေးတော်မူ၏။ သခင်ဘုရား၏မျက်မှောက်တော်နှင့် ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်တော်မှ ဒဏ်ခတ်ခြင်း၊ ထာဝရပျက်စီးခြင်းကို ခံရကြလိမ့်မည်။ ငါတို့သည် သင်တို့အား သက်သေခံသည်အတိုင်း သင်တို့သည် ယုံကြည်ကြ၏။"
၎င်းသည်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာချိန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုဖော်ပြထားသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှစ်ခုအကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုရေးသားခဲ့တာနဲ့ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ ကောင်းမကောင်းကိုထိုနေ့တွင်ပင်ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုပေါလုကပြောခဲ့သည်။
ပေါလုသည် ယောဟန်၌ယေရှုပြောခဲ့သည့်စကားကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြန်ပြောနေပါသည်။ 5,28၂၉ က “မအံ့သြပါနဲ့။ အကြောင်းမူကား၊ သင်္ချိုင်းတော်၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည် သူ၏စကားသံကိုကြား၍၊ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်သောသူတို့သည် ထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ အကောင်းနဲ့အဆိုး ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း ယေရှုပြောခဲ့တယ် - ဘယ်သူမဆို အနာဂတ်ကို အကောင်းဆုံးဖော်ပြနိုင်မယ်ဆိုရင် ယေရှုပဲဖြစ်တယ်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်သောအခါ ယေရှု၏စကားများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော၊
အယူဝါဒဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်၍ ပေါလု၏အရှည်လျားဆုံးကောက်ကြောင်းဖြစ်သော ရောမကိုကြည့်ကြပါစို့။ ရောမဘာသာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ဘုန်းအသရေကို ဖော်ပြသည်။ 8,18အကြောင်းမူကား၊ ဤအချိန်၌ ဆင်းရဲဒုက္ခသည် ငါတို့အား ထင်ရှားစေမည့် ဘုန်းအသရေနှင့် နှိုင်းယှဥ်၍ မထိုက်ဟု ငါယုံကြည်၏။ အကြောင်းမူကား၊ သတ္တဝါ၏ ကြောက်ရွံ့ခြင်း သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ ပေါ်ထွန်းလာရန် စောင့်မျှော်နေပါသည်။ အမှန်မှာ၊ ဖန်ဆင်းခြင်းသည် အလိုဆန္ဒမပါဘဲ အသေခံခြင်း၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သည်၊ သို့သော် ၎င်းကို အုပ်စိုးသူအားဖြင့်- မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်သာ၊ အကြောင်းမူကား၊ ဖန်ဆင်းခြင်းခံရသော ဖောက်ပြန်ခြင်းနှောင်ကြိုးမှ လွတ်၍ ဘုရားသခင်၏သားတော်တို့၏ ဘုန်းအသရေတော်သို့ လွတ်စေလိမ့်မည်” (း၁၈-၂၁)။
ဖန်ဆင်းခြင်းသည်ဘုရားသခင့်သားသမီးများကိုဘုန်းအသရေရသောအခါအဘယ်ကြောင့်စောင့်ဆိုင်းသနည်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းခြင်းဟာလည်းကျွန်ဘဝကနေလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်။ ဘုရားသခင်၏သားတို့သည်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းသို့ရောက်သောအခါ၊ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်များပြန်လည်သက်ရောက်လိမ့်မည်။ ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာသောအခါကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်ရှိလိမ့်မည်။
ပေါလုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား တူညီသောအမြင်ကိုပေးသည်။ 1. ကောရိန္သု ၁5. အခန်းငယ် ၂၃ တွင် ခရစ်တော်နှင့်စပ်လျဉ်းသောသူများသည် ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာသောအခါ ရှင်ပြန်ထမြောက်ကြမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်။ အခန်းငယ် ၂၄ က “ထို့နောက် အဆုံး” ဟုဆိုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အဆုံးသည် မည်သည့်အချိန်တွင် လာမည်နည်း။ ခရစ်တော်သည် မိမိလူတို့ကို ထမြောက်စေခြင်းငှာ ကြွလာသောအခါ၊ ရန်သူအပေါင်းတို့ကို ဖျက်ဆီး၍၊ အလုံးစုံတို့ကို ပြန်လည်ထူထောင်၍၊ နိုင်ငံတော်ကို ခမည်းတော်လက်သို့ အပ်တော်မူလိမ့်မည်။
အခန်းငယ် ၂၃ နှင့်အခန်းငယ် ၂၄ အကြားနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်တောင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ အနည်းဆုံးတော့အချိန်ကာလတစ်ခုရှိရင်ပေါလုအတွက်သိပ်အရေးမကြီးဘူးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ အမှန်မှာ၊ ဤသို့သောအချိန်ကာလသည်အခြားနေရာများတွင်သူရေးသားခဲ့ရာများနှင့်ဆန့်ကျင်။ ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောဆိုရာနှင့်ဆန့်ကျင်ပုံရသည်။
ရောမ ၁၁ တွင်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာပြီးနောက်မည်သည့်နိုင်ငံမျှအကြောင်းမဖော်ပြထားပါ။ သူပြောသည့်အရာသည်ဤအချိန်ကာလနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သော်လည်းရောမ ၁၁ တွင်သူ့အားကျွန်ုပ်တို့ထိုသို့သောအချိန်ကာလကိုမြင်ယောင်စေနိုင်သည့်အရာမရှိပါ။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း 20 တွင် စတင်ကြပါစို့။1. စာတန်ကို ချည်နှောင်ရန် ကောင်းကင်တမန် [ကောင်းကင်တမန်] လာသည်။ ခရစ်တော်၏သွန်သင်ချက်များကို သိရှိသူတိုင်းသည် ဤသို့ဖြစ်နေပြီဟု ထင်ကောင်းထင်ပေမည်။ မဿဲ ၁၂ တွင် ယေရှုသည် သူတို့၏မင်းသားမှတစ်ဆင့် နတ်ဆိုးများကို နှင်ထုတ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည်။ ယေရှုက၊
“ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် နတ်ဆိုးတို့ကို ငါနှင်ထုတ်လျှင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် သင့်အပေါ်သို့ ရောက်လေပြီ” (း၂၈)။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် နတ်ဆိုးများကို နှင်ထုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ဤခေတ်ကာလတွင် ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသည်။
ထို့နောက်အခန်းငယ် ၂၉ တွင်ယေရှုဤသို့ ထပ်၍ ဆိုထားသည် -“ သူရဲကိုရှေ့ ဦး စွာမချည်မနှောင်လျှင်သူသည်သူရဲအိမ်သို့ ဝင်၍ သူ၏ဥစ္စာကိုအဘယ်သို့ယူနိုင်မည်နည်း။ သို့မှသာသူသည်မိမိအိမ်ကိုလုယူနိုင်လိမ့်မည်။ ယေရှုသည်စာတန်၏လောကသို့ ဝင်၍ ချည်နှောင်ထားသောကြောင့်နတ်ဆိုးများကိုလှည့်ဖြားနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဗျာ ၂၀ းတွင်အသုံးပြုသောစကားလုံးဖြစ်သည်။ စာတန်သည်ရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့်ချုပ်နှောင်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဤတွင်သက်သေအထောက်အထားများပိုရှိသည်။
ရှင်ယောဟန် ၁2,31 ယေရှုဤသို့မိန့်တော်မူသည်– “ယခု ဤလောက၌ တရားစီရင်ခြင်းခံရပြီ။ ယခု ဤလောက၏မင်းသားသည် နှင်ထုတ်ခံရလိမ့်မည်။" ယေရှု၏အမှုဆောင်စဉ်အတွင်း စာတန်ကို နှင်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။
ကောလောသဲမြို့ 2,15 သခင်ယေရှုသည် ရန်သူတို့ကို ၎င်းတို့၏တန်ခိုးကို ဖယ်ရှားပြီး “လက်ဝါးကပ်တိုင်အားဖြင့် အောင်ပွဲခံ” ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြသည်။
ဟီး 2,1415 ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံခြင်းဖြင့် မာရ်နတ်အား ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည် - ခိုင်မာသောစကားဖြစ်သည်။ "ကလေးများသည် အသွေးအသားရှိသောကြောင့်၊ နတ်ဆိုးဟုခေါ်သော သေခြင်းတရားထက် တန်ခိုးရှိသောသူ၏ တန်ခိုးကို နှုတ်ယူနိုင်စေရန် ထိုနည်းအတိုင်းပင် လက်ခံတော်မူသည်"
In 1. ဂျိုဟန် 3,8 ယင်းက ဤသို့ဆိုသည်– “မာရ်နတ်၏အကျင့်ကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှာ ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ပေါ်ထွန်းတော်မူသည်” ဟုဖော်ပြထားသည်။
ယုဒ ၆ တွင်နောက်ဆုံးကျမ်းပိုဒ်အနေနှင့်“ ကောင်းကင်ဘုံကိုမစွန့်ခွာဘဲမိမိတို့နေအိမ်များကိုစွန့်ခွာသွားသောကောင်းကင်တမန်များပင်လျှင်သူသည်ကြီးစွာသောနေ့၏တရားစီရင်ချက်ကိုအမှောင်ထုထဲတွင်ထာဝရသံကြိုးဖြင့်ချည်နှောင်ထား၏။ ”
စာတန်သည်ချည်နှောင်ခြင်းခံပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏စွမ်းအားကိုလျှော့ချပြီးပါပြီ ထို့ကြောင့်ဗျာဒိတ် ၂၀ ကစာတန်သည်စာတန်ကိုချုပ်နှောင်ထားသည်ကိုယောဟန်မြင်သည်ဟုဆိုသောအခါ၎င်းသည်အတိတ်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောအရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ အခြားရူပါရုံများမပြသောရုပ်ပုံ၏အစိတ်အပိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အချိန်မီပြန်လည်သတ်မှတ်ထားသည်။ စာတန်သည်သူ၏ဆက်လက်လွှမ်းမိုးမှုရှိနေသော်လည်းရှုံးနိမ့်နေသောရန်သူဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ သူသည်လူတို့ကိုလုံး ၀ ဆွဲဆောင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်။ စောင်ကိုဖယ်လိုက်ပြီးလူမျိုးအပေါင်းမှလူများသည် the ၀ ံဂေလိတရားကိုကြားနာ။ ခရစ်တော်ထံလာပြီးဖြစ်သည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာဇာနည်များသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူရှိနေပြီးဖြစ်ကြောင်းနောက်ကွယ်မှမြင်တွေ့ရသည်။ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသော်လည်းသူတို့သည်အသက်ပြန်ရှင်။ ခရစ်တော်နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကယခုကောင်းကင်၌ရှိသည်ဟုနှစ်တစ်ထောင်မြင်ကွင်းကဆိုသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အသက်ပြန်ရှင်လာကြမည့်ပထမဆုံးထမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ပထမတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်လာရန်ဖြစ်သည်။ ဤထမြောက်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သူအားလုံးသည်ကောင်းချီးနှင့်သန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမသေခြင်းသည်ဒုတိယသေခြင်းနှင့်ခြားနားသည်။ ထို့ကြောင့်ပထမထမြောက်ခြင်းသည်ဒုတိယအကြိမ်နှင့်တူမည်ဟုယူဆခြင်းသည်လက်တွေ့မကျပါ။ သူတို့ကအနှစ်သာရမှာကွာခြားတယ်။ ဘုရားသခင့်ရန်သူများသည်နှစ်ကြိမ်သေသကဲ့သို့ရွေးနုတ်ခံရသူတို့သည်နှစ်ကြိမ်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်။ ဤရူပါရုံတွင်အာဇာနည်များသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူရှိနေပြီးသူတို့ကသူနှင့်အတူစိုးစံရပြီးဤအရာသည်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဟူသောအသုံးအနှုန်းဖြင့်ဖော်ပြသောအချိန်ကြာမြင့်သည်။
ထိုအချိန်ကာလကုန်ဆုံးသွားသောအခါစာတန်လွတ်မြောက်လိမ့်မည်။ ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ စာတန်နှင့်သူ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များသည်ထာဝစဉ်ရှုံးနိမ့်သွားမည်။ တရားစီရင်ခြင်း၊ မီးအိုင်၊ ထို့နောက်ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်ရှိလိမ့်မည်။
ဤအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အချက်ကို အပိုဒ်ငယ် ၈ ၏မူရင်းဂရိကျမ်းပိုဒ်တွင် တွေ့ရသည်– စာတန်သည် စစ်တိုက်ရန်သာမက တိုက်ပွဲအတွက် လူမျိုးများကို စုစည်းထားသည်—ဗျာဒိတ် ၁၊6,14 နှင့် ၆9,19. အခန်းငယ်သုံးပိုဒ်စလုံးသည် ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာချိန်တွင် တူညီသော ပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲကို ဖော်ပြသည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းသာရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်၏အနှစ်တစ်ထောင်ချည်နှောင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတစ်ခုထက် ပို၍ ရှိမည်၊ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တွင်အနည်းဆုံးအဆင့်သုံးဆင့်ရှိသည်ဟူသောစာသား၏အမြင်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံကောင်းလက်ခံလိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးနိဂုံးချုပ်တိုက်ပွဲနှစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးသောနေ့၌ဝါကျတစ်ကြောင်းထက်မကရှိသည်။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုသခင်ယေရှုပြန်ကြွလာသောအခါအဆုံးရောက်လာလိမ့်မည်ဟုသွန်သင်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာကျန်ရှိသောဓမ္မသစ်ကျမ်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဟန်ရှိသောအရာတစ်ခုခုကိုတွေ့လျှင်၎င်းသည်နောက်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ထူးဆန်းခြင်းကိုလက်ခံစရာမလိုပါ။ ၎င်းအစား၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အကြောင်းအရာကိုရူပါရုံများနှင့်သင်္ကေတများစာအုပ်တွင်ကြည့်ပြီး၎င်း၏သင်္ကေတများကိုအခြားကျမ်းစာနှင့်ဆန့်ကျင်သောနည်းလမ်းဖြင့်မည်သို့အနက်ဖွင့်နိုင်သည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ရှုပ်ထွေးသောဘာသာရေးစနစ်ကိုသမ္မာကျမ်းစာတွင်မထင်ရှားသောကျမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့မအခြေခံနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေပြီးဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံလွှဲစေလိမ့်မည်။ ကျမ်းစာပါသတင်းစကားသည်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာပြီးနောက်ယာယီနိုင်ငံတော်ကိုအာရုံမစိုက်ပါ။ ၎င်းသည်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူသောအခါခရစ်တော်ပြုတော်မူသောအမှု၊ သူသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌ယခုလုပ်ဆောင်နေသောအရာနှင့်၎င်းသည်သူပြန်လာသောအခါထာဝရတည်မြဲရေးအတွက်မည်သို့အဆုံးသတ်မည်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။
အနှစ်တစ်ထောင်ရှုထောင့်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သမ္မာကျမ်းစာအထောက်အပံ့မပါပါ။ လေ့လာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပယ်လို့မရဘူး။ ထောင်စုနှစ်ကိုလေ့လာရန်ကူညီနိုင်သောစာအုပ်အချို့ဖြစ်သည်။
ထောင်စုနှစ်၏အဓိပ္ပာယ် - အမြင်လေးခု၊ Robert Clouse တည်းဖြတ်၊ InterVarsity, 1977 ။
ဗျာဒိတ် - လေးရှုထောင့် - စင်ပြိုင်ဝေဖန်ချက် [ဗျာဒိတ် ၄ ချက်၊ တစ်ခု
စင်ပြိုင်ထင်မြင်ချက်] စတိဗ်ဂရက်ဂ်၊ နယ်လ်ဆင်ထုတ်ဝေသူများ၊ ၁၉၉၇ ။
အနှစ်တစ်ထောင် Maze: :ဝံဂေလိရွေးချယ်စရာထွက် sorting
Options များခွဲထုတ်ခြင်း] Stanley Grenz၊ InterVarsity, 1992 ။
Darrell Bock, Zondervan, 1999 ထောင်စုနှစ်နှင့် Beyond အပေါ်ရှုထောင့်သုံးခု။
Millard Erickson သည်ထောင်စုနှစ်နှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်တစ်အုပ်နှင့်၎င်းအကြောင်းကိုသူ၏ခရစ်ယာန်ဓမ္မ၌ကောင်းသည့်အခန်းတစ်ခန်းရေးသားခဲ့သည်။ သူကတစ်ခုမဆုံးဖြတ်ခင်ရွေးချယ်စရာများကိုခြုံငုံသုံးသပ်သည်။
ဤစာအုပ်အားလုံးသည်ထောင်စုနှစ်နှင့်ပတ်သက်သောအယူအဆတစ်ခုစီ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုဖော်ပြရန်ကြိုးစားသည်။ အချို့များတွင်စာရေးသူများသည်အပြန်အလှန်အမြင်များကိုဝေဖန်ကြသည်။ ဤစာအုပ်အားလုံးကမေးခွန်းများသည်ရှုပ်ထွေးပြီးတိကျသောအခန်းငယ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အလွန်အသေးစိတ်ကျကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒါကဆွေးနွေးငြင်းခုံဆက်လက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ premillennialist ထံမှဖြေပါ
တစ် ဦး premillennialist amillennial အမြင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ အဖြေတွင်အချက်လေးချက်ပါဝင်နိုင်သည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည်သမ္မာကျမ်းစာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုနားလည်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်သို့မဟုတ်၎င်းသည်အပေါကလစ်စာပေဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏သွန်သင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လျစ်လျူရှု။ မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားကျမ်းပိုဒ်များကိုရှုမြင်ပုံကိုပြောင်းလဲစေသည့်တိုင်၎င်းကိုကျမ်းချက်အဖြစ်လက်ခံရပါမည်။ ငါတို့ပြောတာတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါပြောရုံတင်မဟုတ်ဘဲအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြသခွင့်ပေးရမယ်။ ၎င်းသည်အသစ်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုပြလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကြိုတင်မယူဆနိုင်ပါ။
နောက်ထပ်ထုတ်ဖော်အစောပိုင်းထုတ်ဖော်ရန်ဆန့်ကျင်မဟုတ်ပါဘူး။ သခင်ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းပြောခဲ့သည်မှာမှန်ပါသည်၊ သို့သော်သူသည်အခြားမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ရှေ့မှောက်၌ထမြောက်နိုင်ခြင်းကိုမြင်ခြင်းမှာဆန့်ကျင်ဖက်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိဘဲရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှစ်ခုရှိပြီးဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောကာလများကိုခွဲခြားထားသည်ဟုယူဆခြင်းသည်ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဓိကအချက်မှာလူတစ် ဦး စီသည်တစ်ကြိမ်သာကြီးပြင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ အပိုအဆင့်များကိစ္စ။ ဂျူးများသည် မေရှိယအား ရွှေခေတ်သို့ ချက်ချင်းပို့ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ခဲ့သော်လည်း သူသည် မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ပရောဖက်ပြုချက်များ ပြည့်စုံခြင်းတွင် ကြီးမားသော အချိန်ကွာခြားမှု ရှိခဲ့သည်။ ယင်းကို နောက်ပိုင်းတွင် ဗျာဒိတ်တော်များဖြင့် ရှင်းပြထားသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ ယခင်က တစ်ခါမှ မထုတ်ဖော်ဖူးသော အချိန်ကာလများကို ထည့်သွင်းခြင်းသည် ကွဲလွဲမှုမဟုတ်ပေ၊ ယင်းသည် ရှင်းလင်းချက်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှုသည် မကြေညာနိုင်သော ကွာဟချက်ဖြင့် အဆင့်များအထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ 1. ၁ ကောရိန္သု 15 တွင် ထိုသို့သောအဆင့်များကို ဖော်ပြပြီး ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် သဘာဝအရှိဆုံးသဘောအရလည်း အလားတူဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ ခွင့်ပြုရပါမည်။
အနှစ်တစ်ထောင်ရှုထောင့်ကဗျာဒိတ် ၂၀း၁-၃ ၏ဘာသာစကားကိုလုံလောက်စွာကိုင်တွယ်ပုံမရပေ။ စာတန်ကိုချည်နှောင်ထားရုံသာမကသူသည်ချုပ်နှောင်ခံရပြီးတံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ ဒီပုံဟာသူရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမရှိတော့တဲ့နေရာ၊ သခင်ယေရှုသည်စာတန်၏စည်းနှောင်မှုအကြောင်းပြောဆိုခြင်းသည်မှန်ကန်ပြီးသူသည်စာတန်ကိုကားတိုင်ပေါ်တွင်အနိုင်ယူခဲ့သည်။ သို့သော်စာတန်အပေါ်ယေရှုခရစ်၏အောင်ပွဲသည်အပြည့်အဝမသိသေးပါ။ စာတန်သည်တက်ကြွစွာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးလူအမြောက်အမြားကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ သားရဲနိုင်ငံတော်၏နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကိုခံနေရသောမူလစာဖတ်သူများသည်စာတန်ကိုချုပ်နှောင်ထားပြီးဖြစ်သည်ဟုအလွယ်တကူမယူမှတ်နိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်လူမျိုးများကိုလှည့်ဖြားနိုင်တော့မည်မဟုတ်ချေ။ စာရှုသူများသည်ရောမအင်ပါယာ၏အများစုသည်ဖြားယောင်းသွေးဆောင်နေကြောင်းကောင်းစွာသိကြသည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်အနှစ်တစ်ထောင်ကြည့်ရှုသူကဤသို့ပြန်ပြောနိုင်သည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရာကိုဘုရားသခင်အားထုတ်ဖော်ပြသခြင်းကိုခွင့်ပြုနိုင်သည်မှန်သည်၊ သို့သော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းပါထူးခြားသောအရာတိုင်းသည်အမှန်တကယ်တွင်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကြိုတင်မယူဆနိုင်ပါ။ ယင်းအစား၎င်းသည်အသစ်သောပုံစံဖြင့်အယူအဆဟောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုအချိန်ကာလကွာခြားမှုတစ်ခုနှင့်ကွဲကွာစေနိုင်သည်ဟူသောအယူအဆသည်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ စာဖတ်သူတွေကိုစာဖတ်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာငါတို့ရဲ့စိတ်ကူးကစာတန်ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သင့်တယ်
Apocalyptic အမှတ်လက္ခဏာတွေတကယ်ထိန်းချုပ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ ကျနော်တို့တစ် ဦး ပုဂ္ဂလဒိive္စှဲမှလာနိုင်ပါတယ်
ထောင်စုနှစ်ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးအမြင်နှစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရပြီဆိုရင်အခုငါတို့ဘာပြောသင့်သလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းမတိုင်မီ (သို့) နောက်လိုက်အနှစ်တစ်ထောင်အားခရစ်ယာန်အစဉ်အလာအရထောင်စုနှစ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ အချို့သူများကမူကျမ်းစာအထောက်အထားများသည်သင်္ကေတအရအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုဖော်ပြသည်။ သူပြန်လာသောအခါ။ "
ထောင်စုနှစ်သည်စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီးမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသတ်မှတ်သည့်အယူဝါဒတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤခေါင်းစဉ်အားမည်သို့အနက်ဖွင့်ရမည်ကိုသူတို့၏ရွေးချယ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ခရစ်ယာန်များကိုမခွဲခြားလိုပါ။ တူညီသောစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်၊ တူညီသောပညာတတ်ပြီးတန်းတူညီမျှသောသစ္စာရှိခရစ်ယာန်များသည်ဤအယူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောကောက်ချက်များချနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ချာ့ချ်အသင်းဝင်အချို့သည်အနှစ်တစ်ထောင်၊ အချို့သောနှစ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်အခြားအမြင်များကိုဝေမျှကြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူရန်များစွာရှိသည် -
ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအသက်ပေးသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သေသောအခါသူနှင့်အတူရှိမည်၊ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသည်။
ထာဝရသည်ထောင်စုနှစ်ထက် ပို၍ ကောင်းမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
ကျနော်တို့သဘောတူနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာအများကြီးရှိသည်ဖြစ်။ , ဘုရားသခင်သည်သူ၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားကွဲလွဲမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မလိုပါ။
နောက်ဆုံးသောကာလ၏သက္ကရာဇ်စဉ်သည်ချာ့ချ်၏ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်း၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ။ ၀ ံဂေလိတရားသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းနှင့်ဖြစ်ပျက်သည့်အချိန်၏သက္ကရာဇ်စဉ်မဟုတ်ပါ။ သက္ကရာဇ်စဉ်အစဉ်အလာကိုယေရှုအလေးပေးဖော်ပြခြင်းမရှိ။ အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာတည်ရှိမည့်အင်ပါယာကိုလည်းသူအလေးအနက်ဖော်ပြခြင်းမရှိချေ။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိအခန်း ၂၆၀ တွင်တစ်ခုသည်ထောင်စုနှစ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ဗျာဒိတ် ၂၀ ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုယုံကြည်ခြင်းဆောင်းပါးတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မပြုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှာဟောဖို့ပိုအရေးကြီးတဲ့အရာတွေရှိပြီးပိုကောင်းတဲ့ဟောပြောဖို့လည်းလိုတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤခေတ်၌သာမကနှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ မျှသာမဟုတ်ဘဲထာဝရငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့်သာယာဝပြောခြင်းတို့ဖြင့်အဆုံးမဲ့ထာဝရအသက်တာ၌အသက်ရှင်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသည်။
ထာဝရကာလသည်အနှစ်တစ်ထောင်ထက် သာ၍ မြတ်သောဘုန်းအသရေဖြစ်၏။ အကောင်းဆုံးမှာထောင်စုနှစ်သည်ဒုတိယအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အတိအကျသက္ကရာဇ်စဉ်အလိုက် the ၀ ံဂေလိတရား၏မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၀ ံဂေလိတရားသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သို့မည်သို့ ၀ င်ရောက်ရမည်နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များမဟုတ်ဘဲထိုနိုင်ငံတော်၏အဆင့်များနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များမဟုတ်ပါ။
Point ၀ ံဂေလိတရားသည်အဓိကမဟုတ်ပေ။ အဖွဲ့ဝင်များကဤအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောထင်မြင်ချက်များကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။
အသင်းဝင်တစ် ဦး သည်မည်သို့ပင်ရှုမြင်ပါစေအခြားခရစ်ယာန်များသည်သမ္မာကျမ်းစာမှမဟုတ်ဟုသွန်သင်သည်ကိုစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ယုံကြည်ကြောင်းသူအသိအမှတ်ပြုသင့်သည်။ မတူညီသောအမြင်များရှိသူများကိုအဖွဲ့ဝင်များကမစီရင်သင့်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါစာအုပ်တစ်အုပ် (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသောအရာများကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်အသင်းဝင်များသည်အခြားယုံကြည်ချက်များအကြောင်းကိုသင်ယူနိုင်သည်။